Vaovao: eo am-pametrahana ny taolam-by misy tranobe misy rihana marobe ao amin'ny seranam-piaramanidina Shenzhen
Ny taolana vy an'ny fananganana vy (No.7) ao amin'ny foibe Shenzhen Airlines-Guangdong Honghua Construction Co., Ltd, na Honghua, dia tompon'andraikitra amin'ny famokarana sy ny fametrahana azy. Misaotra an'i Shenzhen Airlines sy Hunan Construction indray.
Trano iray misy rihana tokana no misy trano misy rihana tokana ihany. Jereo ny famaritana trano-tokana raha te hahalala bebe kokoa. Trano misy rihana marobe dia mirehitra izay misy rihana maromaro, ary matetika dia misy fivezivezena mitsivalana amin'ny endrika arabe, tohatra ary fiakarana.
Iray amin'ireo tombontsoa lehibe indrindra amin'ny fananganana trano misy rihana maro dia ny habaka honenana saika avo roa heny, avo telo heny aza (miankina amin'ny isan'ny gorodona) raha ampitahaina amin'ny trano rihana tokana naorina teo amin'ilay tany tokana ihany. Ankoatr'izay, amin'ny fanapahan-kevitra hanangana ambony dia azonao atao ny manatsara ny habaka an-tokontanyo amin'ny alàlan'ny tsy fananganana trano malalaka kokoa hahazoana toerana hipetrahana.
Trano misy rihana maro no manome fizarana habaka honenana tsara kokoa. Ho an'ny iray, amin'ny ankamaroan'ny tranga dia misy ny fisarahana eo amin'ny faritra fatoriana sy ny faritra ipetrahana hafa satria ny ankamaroan'ny efitrano fatoriana dia toa any ambony rihana raha toa ka ny faritra toa ny lakozia sy ny efitra fisakafoana ary ny efitrano fandraisam-bahiny no mijanona ao ambany. Noho izany dia tsy dia sahiran-tsaina ianao rehefa matory. Ary koa, ny trano misy rihana maro dia matetika manome safidy maro kokoa amin'ny lafiny fandaminana sy ny endrika.
Fotoana fandefasana: Apr-01-2020